RASMI: Xidhiidhka Kubbada Cagta Yurub Ee UEFA Oo Soo Gaba Gabeeyay Baadhitaankii Sharciga Dhaqaale Wanaaga, PSG, Inter Milan, AS Roma & Kooxo Badan Oo Kale- Maxaa Ka Soo Baxay? – GOOL24.NET
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa ugu danbayn soo gabagabeeyay baadhitaano dheer oo uu ku waday kooxo badan oo horyaalada Yurub ka ciyaara oo ay ka mid yihiin kooxaha PSG,FC Krasnodar, FC Lokomotiv Moscow, AS Monaco FC, AS Roma, FC Zenit St Petersburg iyo waliba kooxo kale looga shaki yay in ayna u hogaansamin sharciga dhaqaale wanaaga Yurub.
Kooxda PSG ayaa ka badbaaday in laga ganaaxay tartanka UEFA Champions League kadib markii ay UEFA xaqiijisay in ayna jabin sharciga dhaqaale wanaaga Yurub markii ay la soo saxiixatay Neymar Jr ee ay 222 milyan euros kula soo wareegtay isla markaana ay Mbappe ay ku soo qaadatay amaah ay ka bixinayso 180 milyan euros.
Laakiin kooxda PSG ayaa u baahan in 60 milyan euros ay ka samayso ciyaartoy ay iibiso inta ka horaysa June 3,2018 markaas oo ay si rasmi ah u xidhmi doonto xisaabta xili ciyaareedkii dhamaaday, waxayna PSG mutaysa kartaa ganaax lacageed haddii ayna 60 milyan euros xisaabteeda ku soo kaabin 17 ka maalmood ee soo socda.
War saxaafadeed aad u dheer oo ay UEFA soo saartay sila markaana uu soo diyaariyay golaha baadhitaanka UEFA ee CFCB Investigatory Chamber ayaa lagu cadeeyay in kooxaha FC Krasnodar, FC Lokomotiv Moscow, AS Monaco FC, AS Roma iyo FC Zenit St Petersburg ay dhamaantood u hogaansameen sharciga dhaqaale wanaaga Yurub.
Dhinaca kale kooxda Inter Milan ayaa ku guulaysatay in ay si buuxda ugu hogaansantay sharciga dhaqaale wanagaa Yurub inkasta oo ay xili ciyaareedyadii ugu danbeeyay ka maqnayd kubbada cagta Yurub taas oo guul wayn u ah kooxda Inter si la mid ah kooxda Trabzonspor AŞ oo iyaduna sharcigan buuxisay.
Kooxda Roma oo ay haysatay dhibaato wayn taas oo ku qasabtay in ay Mohamed Salah xagaagii hore iibisay ayaa ugu danbayn buuxisay sharciga dhaqaale wanaaga Yurub waxayna hadda haysataa fursad ayna ciyaartoy kale iskaga iibin doonin si ay dhaqaale ahaan iskugu dheeli tirto kharash iyo dakhliga kooxdeeda.
Laakiin warka ugu wayn ayaa ah in Paris Saint-Germain ay ka baxsatay UEFA isla markaana ay ka badbaaday ciqaab looga saari lahaa tartanka Champions League iyada oo hadda ka shaqayn doonta in ay 60 milyan euros ku dheeli tirto kharashkii iyo dakhligii kooxdeeda ee xili ciyaareedkii dhamaaday.
Waxaa qoraalka UEFA ee PSG looga hadlay lagu yidhi: ” Golaha baadhitaanka CFCB Investigatory Chamber waxa uu go’aansaday in la soo xidho baadhitaankii Paris Saint-Germain. Go’aanka noocani ahi waxa uu raacsan yahay baadhitaan faah faahsan oo ah heshiisyada la la wareegay iyo qiimaynta maamulka xisaabaadka la xidhiidha kaas oo xaqiijiyay in macaamiladani ay waafaqsanayd shuruucda iyo qawaaniinta kooxaha ee UEFA”.
Kooxaha Galatasaray iyo Maccabi Tel Aviv ayaan ku guulaysan in ay wada fuliyaan sharciga dhaqaale wanaaga Yurub halka kooxda Olympique Marseille lagu ganaaxay lacag dhan €100,000 kun oo euros.